प्रकाशित मिति: २०७५, १५ मंसिर शनिबार १९:२५
१५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार पोल्याण्ड प्रस्थान गर्नु भएको छ । पोल्याण्डमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि कोप २४ औं सम्मेलनमा सहभागी हुन भण्डारी पोल्याण्ड प्रस्थान गर्नु र्भएको हो । उहाले सोमबार सम्मेलनलाई सोम्बोधन गर्नुहुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित केही सांसद र उच्च पदस्थ अधिकारीहरु पनि भ्रमण […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान ।
प्रकाशित मिति: २०७५, ६ आश्विन शनिबार २२:३०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आज बेलुकी न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन ओली २० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । टोलीमा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका सहित सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरु रहेको जनकारी आएको छ । भ्रमणका […]
एमाले शीर्ष नेताहरुलाई मुद्धा हाल्ने निर्णय !
प्रकाशित मिति: २०७३, २५ फाल्गुन बुधबार २१:१६
काठमाडौं । सप्तरी स्थित राजविराज बार र सप्तरी जिल्ला वार इकाईका कानुन व्यवसायीहरुको संयुक्त बैठकले एमाले शीर्ष नेताहरुलाई मुद्धा हाल्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार राजविराजको घटनालाई लिएर एमाले शीर्ष नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूवैप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेताहरु सत्यनारायण मण्डल, सुमनराज प्याकुरेल, दिवाकर […]
फोटो कन्सर्न राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड हुने।
प्रकाशित मिति: २०७३, ४ फाल्गुन बुधबार १९:२७
राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७३ का संयोजक प्रदिपराज वन्त र फोटो कन्र्सन प्रालिका अध्यक्ष सृजना थापाबीच कार्यक्रम प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता पत्र हस्तान्तरण हुदै ।तस्बिर: एनएफपी काठमाडौं । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह–एनएफपीजेले आफ्नो स्थापनाको २० औं वर्षगाँठको अवसर पारेर आगामी २०७४ साल बैशाख १३ गते राजधानीमा ‘फोटो कन्सर्न राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड– २०७३’ आयोजना गर्ने भएको […]
फागुन ५ देखि मैदानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र !
प्रकाशित मिति: २०७३, २७ माघ बिहीबार २०:५९
काठमाडौं।पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विशेष राजनीतिक संवादका निम्ति गत साता थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक पुगेका छन्। गत बुधबार (माघ १९) साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष प्रतिनिधिहरुसंग रात्रिभोजसहितको भेटवार्तापछि उनी बैकक प्रस्थान गरेका हुन। पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह र स्वकीय सचिवलाई साथमा लिएर बैंकक पुगेका पूर्वराजाले त्यहाँ चीन र भारतका विशेष दूतहरुसंग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने घटना र विचार […]
झापाको दमकमा संसारकै अग्लो बुद्धमुर्ती सहितको पार्क निर्माण हुने ।
प्रकाशित मिति: २०७३, २६ माघ बुधबार २२:२५
दमक । झापाको दमकमा संसारकै अग्लो बुद्धमुर्ती सहितको पार्क निर्माण हुने भएको छ। दमकको उत्तरी क्षेत्रमा स्थापना हुने पार्कको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन–डिपिआर तयार भैसकेको आज दमकमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। संसारकै अग्लो ५ सय ४० फिटको बुद्ध मूर्तीसहितको पार्क रहने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो। यस क्षेत्रलाई ‘दमक विराटन बुद्ध भिलेज’ नामाकरण गरिएको छ। त्यसको डिपिआर मल्टि डिसिप्लिनरी […]